Ihe ị ga-ahụ na Florida | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Florida
Mariela Carril | | United States, General, Ihe ị ga-ahụ
Otu n'ime steeti ndị mejupụtara United States bụ Florida. Ọ bụ ala ebe ọtụtụ mmadụ bi na mbara ala ya mere ka ọ bụrụ ebe ọ ga-adịrị ndị na-anụ ụtọ anwụ na oke osimiri.
Nke ahụ bụ Florida ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri kachasị ogologo na mba ahụ, bi n'akụkụ nke Ọwara Oké Osimiri Mexico na nke ahụ na-eme ka ọ nwee obi ụtọ subtropical ihu igwe otutu mmiri. You na-enwe mmasị n'echiche nke anyanwụ, ikuku na osimiri na ogige ntụrụndụ na-atọ ụtọ? Ya mere, ka anyị hụ taa ihe ị ga-eme na Florida.
Ibu ụzọ ị ga-asị ee, Florida ya na ogige ntụrụndụ nwere otu okwu mana ọ naghị enye naanị nke ahụ. Mee ngwa ngwa, ka anyị kwuo maka ewu ewu na ama ama ama: ama egwuregwu ogige.
Na Florida ị nwere ike ịga Legoland, Walt Disney World, Universal Sutudios na Seaworld. legoland dị na Winter Haven ma meghere na 2011. O nwere ebe iri ise na-adọrọ mmasị ya na ọtụtụ ịnyịnya, egwu agbụrụ, igwe na-agba agba, ebe mmiri na ubi.
Walt Disney World na-agụnye ogige ntụrụndụ anọ: Alaeze Anwansi, Epcot, Disney nke Hollywood Studios na Disney's Animal Kingdom gbakwunye ogige mmiri abụọ, ụlọ oriri na ọ resortụ resortụ 34, ebe a na-egwu golf, spa abụọ zuru oke na egwuregwu egwuregwu ESPN Disney gbakwunye Disney Springs Mall.
Mahadum Orlando Ọ dị mgbagwoju anya ịme ihe niile n'ihi na ọ nwere ebe ntụrụndụ ezinụlọ ebe ọ na-enweghị onye na-agwụ ike. N'otu akụkụ bụ Agwaetiti nke njem, agwaetiti asaa isiokwu nwere ọtụtụ ịnyịnya na ala ndị na-agba ọsọ, Jurrasic Park dinosaur, Incredible Hulk na Harry Potter. N'aka nke ọzọ, e nwere Universal Studios na ebe nkiri ya dị ka Men in Black, Shrek 4D ma ọ bụ Jimmy Neutron.
Ọ na-anọgide na Universal CityWalk na ụlọ nri ya, klọb na ụlọ ahịa na Universal Resorts. N'ime akwarium na florida enwere ebe anọ iji hụ penguins, enwere Florida Aquarium, enwere dolphins na Mmiri Clearwater Marine ọzọ kwa Mmiri mmiri nke SeaWorld nke bụ ogige ntụrụndụ mara mma nke nwere njegharị na-agagharị na mmiri n'okpuru coral.
Na Florida e nwekwara zoos na ebe nsọ. Bụ Ogige Tampa ya na enyí, nnụnụ, enwe na ndị ọzọ, ezigbo ebe ịga ụmụaka, ya na Ogige Anụmanụ na Jacksonville na Jardine. Ọ bụ nnukwu ebe nwere ọtụtụ ubi na nnukwu ihe ngosi a raara nye agụ.
Ma olee ihe ọzọ Florida na-enye? Nke a na United States nwere nnukwu colonial gara aga ya mere enwere otutu saịtị juputara na akuko. Dịka ọmụmaatụ, enwere Marlọ San Marcos wuru na oge nke Spanish ichikota iji gbochie ndi bekee.
El Rallọ Coral Ọ bụ ebe dị egwu, nke onye Amerịka sitere n’agbụrụ Lithuania, Edward Leedskalnin wuru. Nwoke a jiri ihe karịrị afọ 28 wuo ihe ncheta a maka ịhụnanya ya, jiri tọn na tọn nkume dị ka coral mana ọ bụ limestone. Ha na-eme mgbidi, arịa ụlọ na ọbụna ụlọ elu. Enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, teliskop Polaris na akwa steepụ kpamkpam. Havega kporie ndụ ruo nwa oge ma were foto chọrọ ịmata ihe.
E nwekwara Nlọ Ernest Hemingway, na obi nke Old Town na Key West. O bi ebe a afọ iri ma dee ọtụtụ ihe. Taa ọ bụ ihe ngosi nka. Ebe ọ bụ na ị nọ na Key West ije dị mma n'okporo ámá duval Ọ bụ ihe amamihe. Ọ bụ okporo ámá ndị kachasị ewu ewu na mpaghara niile, na-ebi ndụ ọtụtụ ehihie na abalị.
Florida bụkwa ala agụ iyi. Anyị na-ahụ ya mgbe niile na fim, yabụ ọ bụrụ na ị masịrị ha, ị nwere ike ịdebanye aha maka a Everglades swamps njem. Can nwere ike ime ha site na kayak ma ọ bụ na ụgbọ mmiri. Ma ọ bụghị naanị n'ụgbọ mmiri ọ bụla mana ọ bụ ụgbọelu, nke ahụ bụ ụdị usoro TV. Na Everglades National Park e nwekwara Ugbo ohia ya na ihe kariri puku mmadu abuo a.
Ga n'ihu na ebili mmiri nke anụmanụ ndị a ị nwere ike ịga na Gumbo Limbo Nature Center na Boca Raton. Ọ bụ ebe echedoro nke nwere coral reef, ọhịa na ọwa mmiri. Enwere urukurubụba observatory, ọtụtụ walkways na-eje ije na ọtụtụ anụ ọhịa na ihe omume ndị emebere maka ndị ọbịa. I nwedịrị ike ịmụta a mbeHa na-enye gị asambodo, ị nwere ike inye ya nri ebe ahụ.
Igwe ọkụ na-adịkwa mgbe niile na ala nke dị n'ụsọ oké osimiri. N'ezie, Florida nwere ụlọ ọkụ iri abụọ na itoolu na obere ego mmadụ nwere ike ịga leta ha ma nwee echiche panoramic a na-agaghị echefu echefu. Kacha akara ngosi nke ọkụ ihu niile bụ Cape Canaveral, maka oghere, ma n’akụkụ ndịda bụ Cape Florida, dị n’okpuru Miami.
Enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na Florida? N'ezie, na Pensacola enwere National Museum nke Naval Aviation Na ihe karịrị ụgbọ mmiri 150 gosipụtara, Childrenmụaka Miamimụaka Miami ya na akpiri akwarium nke mmeko na Ebe ngosi Dali raara nye Salvador Dali. Lọ ahụ, ihe owuwu ahụ, na-aga aha Enigma ma na-asọpụrụ Dalí Museum na Spain. Muselọ ihe ngosi nka ọzọ bụ Linglọ nka nka na nka nka na eserese Europe site na narị afọ nke XNUMX ruo nke XNUMX na ihe ochie America na Asia.
Enwekwara ndi Ogige Ohere nke Kennedy nke dị nso Orlando ma nwee ọtụtụ ihe gbasara nyocha oghere na Ihe ngosi ihe omuma nke Florida nke ihe omuma ya na ohia ya. Dịka ị pụrụ ịhụ, Florida na-enye ihe niile ... ntakịrị.
Florida karịrị ogige ntụrụndụ ọ bụ ezie na amaara ya maka ya. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịga njem mgbe niile n'ụgbọ ala mgbazinye wee gaa mara osimiri ya nke bụ ihe dịka American Caribbean.
South Florida nwere osimiri nwere Latin vibe na ohere nke ịhụ mbupụta oghere mgbe niile. Ugwu ugwu nwekwara oke osimiri mara mma dika Pensacola, Perdido Key State Park n'ụsọ oké osimiri, Santa Rosa ma ọ bụ Panama Cuty Beach.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na mgbakwunye na ogige ntụrụndụ, ọdịdị ala ndị dị na Florida na-akpọ ndị egwuregwu ahụ niile ma ọ bụ ndị njem nleta hụrụ n'anya n'èzí, ịga ije, ịga kayak, sunbathe, dive na snorkel, mee ụfọdụ njem akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụ pụọ maka ị drinksụ mmanya na Ogwe abali.
Nke ahụ bụ, ọ bụghị naanị ebe ezinụlọ na-aga, ị nwere ike ịga dị ka di na nwunye, ị nwere ike ịga naanị gị, ị nwere ike ịga kporie ndụ na ala na ụwa efu ma ọ bụ mikpuo onwe gị na ụwa mara mma. Nke si Florida.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Florida
Coves nke Mallorca